Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Horyaalka La Liga Ee Kooxaha Real Madrid v Deportivo La Coruna. - jornalizem
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Horyaalka La Liga Ee Kooxaha Real Madrid v Deportivo La Coruna.
Kooxda Jose Mourinho ayaa haatan 11 dhibcood ka danbeeya kooxda ay xafiiltamaan ee Barcelona ka hor inta aysan caawa la ciyaarin Deportivo La Coruna, waana ay ka warqabaan inaysan awoodin karin sibxasho kale.
Kulanka: Real Madrid v Deportivo La Coruna
Waqtiga: 8:50 p.m xilliga Soomaaliya
LINE-UPKA MACQUULKA AHREAL MADRID
Pablo, Aythami, Marchena, Evaldo�
Real Madrid ayaa heysata koox buuxda oo taam ah ka hor kulanka ay caawa kula ciyaarayaan Santiago Bernabeu kooxda Deportivo La Coruna, marka laga reebo Michael Essien oo shaki uu ku jiro ka dib markii uu shalay seegay tababarka kooxda isagoo waqtigiisa ku qaatay kaliya qolka jirdhiska, waxaana laga yaabaa inuu booska ka bedelo Sami Khedira.
Daafaca bidix Fabio Coentrao ayaa diyaar ah ka dib markii uu soo dhameystay ganaaxiisii afarta kulan, halka ciyaaryahankii la ilaaway Kaka laga yaabo inuu ciyaaro ka dib markii uu seddexleey ka dhaliyay Millonarios oo ay ciyaar saaxiibtinimo la ciyaareen habeekii arbacada.
Tababaraha Deportivo Jose Luis Oltra ayaan qabin walwal la xiriira dhaawac cusub, iyadoo daafaca Aythami la filayo inuu ku soo bilowdo inkastoo dhaawac looga cabsi qabay.
Weeraryahanka amaahda ku jooga Nelson Oliveira ayaa laga yaabaa inuu ku soo bilowdo markii ugu horeysay isagoo booska kala baxaya Riki.
Real Madrid ayaan 14 kulan oo La Liga ah looga badinin garoonkeeda Santiago Bernabeu.
Kooxda Los Blancos ayaa ku jirta kaalinta 9aad waxaana ay hal dhibic ka sareysaa kooxda Deportivo La Coruna.
Xabi Alonso ayaa ah ciyaaryahanka kaliya marka laga reebo goolhayaha oo ciyaaray daqiiqad kasta oo ciyaar Madrid ah xilli ciyaareedkan.
Deportivo La Coruna ayaan wax guul ah gaarin afar kulan oo ugu danbeysay oo La Liga ah, seddex kulan barbaro ayay galeen halka kulanka kale laga badiyay.
Kooxda La Coruna ayaa laga badiyay lixdii kulan ee ugu danbeysay ee ay booqdaan Santiago Bernabeu.
Guushii ugu danbeysay ee Deportivo ay ku gaartay Bernabeu waxa ay aheyd October 2004 markaasoo ay 1-0 kaga badiyeen Madrid.